Uyinxusa leLife Choice Albinism
AKAZIBONI ehlukile kwabanye uPrincess Lehloka onenhlangano eqwashisa ngokucwaswa kwabanebala elimhlophe
UKUPHILA ngokwesaba ngenxa yezinkolelo eziyize ngabanebala elimhlophe kwenze intombazanyana esencane yasiza unina emkhankasweni wokuqwashisa ngalesi simo.
UPrincess Lehloka (14), ofunda uGrade 8, uthe ngeke asidalule isikole afunda kuso nendawo ahlala kuyo ngenxa yezizathu zokuphepha kwakhe.
Wazalelwa eFree State kodwa usezinze KwaZulu-Natal.
Uyinxusa nomnikazi wenhlangano iLife Choice Albinism elwa nokuhlukunyezwa kwabanebala elimhlophe nabanokukhubazeka.
Uthe le nhlangano yasungulwa ngunina emuva kokubeletha yena okumanje isinganyelwe nguyena uPrincess.
“Ngifunde kanzima ngoba ezinye izingane bezihlekisa ngami ngenxa yebala lami. Namanje akukapheli ngoba kukhona abangaqondi ukuthi abantu abanebala elimhlophe abahlukile kunabanye,” kuchaza uPrincess.
Echaza ngale nhlangano uPrincess uthe basebenzisana noNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi uNksz Lindiwe Zulu, ukuqwashisa ngabanaleli bala.
Njengoba kuyinyanga yokuqwashisa ngebala elimhlophe bavakashela izikole nomphakathi ukuqwashisa abantu.
Uthe kumphatha kabi ukuthi abafana naye babizwa ngamagama okucwasa ngoba babukeka behlukile kunabanye.
Uveze ukuthi kumphatha kabi ukubulawa kwabanebala elimhlophe ngenxa yenkolelo yokuthi izitho zabo zomzimba zenza umuthi wenhlanhla.
“Okubuhlungu wukuthi kunabantu abakholelwa kulokho. Lokhu kwenza ukuthi abanebala elimhlophe bangaphephi emphakathini bahlale ngokucasha. Nami bengisaba kakhulu kodwa sekungcono manje ngoba umama ungifundise ukuzethemba,” kusho uPrincess.
UPrincess, ophinde amodele enze nezikhangiso emikhankasweni yenhlangano yakhe, uthe uyakujabulela ukuthi baningi abamesekayo ngomsebenzi wakhe. Uthe nasezinkundleni zokuxhumana bayamncoma ngesibindi sakhe sokuphumela obala aqwashise ngalo mkhuba ekubeni emncane ngokweminyaka.
Uqhube wathi bathathu kubo kodwa nguyena kuphela onebala elimhlophe.
Uveze ukuthi ohlangothini lukayise bakhona abanebala elimhlophe okungubabekazi wakhe nogogo ozala uyise.
Le ntombazanyana ifuna ukuqhubeka nokumodela iphinde ibe ngumsiki wengqephu njengoba izifela nangokuthatha izithombe.
Ifuna nokuba nenkampani yezimonyo ukuze isize abanebala elifana nelayo.
“Kuyabiza ukunakekela isikhumba uma unebala elimhlophe. Ngiye ngibone indlela eningi ngayo imali echithwa wumama engithengela izimonyo zokugcoba umzimba. Ngiyafisa ukuba nenkampani yomkhiqizo wezimonyo ukuze ngisize abafana nami kwehle umthwalo wokuchitha imali eningi,” kusho uPrincess.